स्ट्रिमगिक शिखर सम्मेलन न्यूयोर्क शहर | को नेतृत्वमा छ NAB देखाउनुहोस् समाचार | २०२० एनएबी शो मिडिया पार्टनर र एनएबी शो लाइभको निर्माता। प्रसारण ईन्जिनियरिंग समाचार
घर » सामाग्री रचना » स्ट्रिमगिक शिखर सम्मेलन न्यूयोर्क शहरको नेतृत्वमा रहेको छ
स्ट्रिमगिक शिखर सम्मेलन न्यूयोर्क शहरको नेतृत्वमा रहेको छ
पॉल रिचर्ड्स द्वारा, मुख्य स्ट्रीमिंग अधिकारी, StreamGeeks
पाँच पटक ओलम्पिक सुनको जिम्नास्ट नादिया कोम्नेसीले एक पटक भनेका थिए: "यात्राको मजा लिनुहोस् र हरेक दिन अझ राम्रो हुन कोसिस गर्नुहोस्, र जुन काम गर्नुहुन्छ त्यसमा जोश र प्रेम गुमाउनु हुँदैन।" ती शब्दहरू मेरो यात्राको साथमा मेरो संगिल भएका छन्। 2017 मा स्ट्रिमगिक्स।
यो नोभेम्बर, स्ट्रिमगिक्स न्यूयोर्कमा आफ्नो प्रकारको प्रत्यक्ष स्ट्रीमि sum शिखर सम्मेलन को पहिलो होस्टिंग हुनेछ। प्रत्यक्ष स्ट्रिमि education शिक्षाको यो पूर्ण दिनले स्ट्रिमिंग मिडियाको भविष्यको बारेमा छलफल गर्न भिडियो उत्पादन र मार्केटिंग उद्योगमा शीर्ष दिमागलाई एक साथ ल्याउनेछ। तर पर्खनुहोस्, स्ट्रिमजीक को हुन्? लाइभ स्ट्रिमिंगको बारेमा यी व्यक्तिहरूलाई के थाहा छ?
जब मैले पहिलो पटक 2015 मा लाइभ स्ट्रिम गर्न सुरु गरें, मैले लगभग प्रत्येक गल्ती सम्भव तुल्याए। एक वर्ष पछि, YouTube मा नियमित प्रत्यक्ष स्ट्रिमहरू उत्पादन गर्दै, हाम्रो कम्पनीले बिक्री र अनलाइन जोखिममा एक ठूलो अप्टिक देख्न सुरु गर्यो। हाम्रो प्रयोग गर्दै PTZOptics प्रत्यक्ष स्ट्रिमि cameras क्यामेरा, मैले एउटा खाका भेट्टाए, र समर्पित श्रोताहरू निर्माण गर्न सुरु गरे। लामो समय सम्म मैले एक सह-होस्ट र अन्ततः एक पूर्ण-समय निर्माता मा ल्याए। 2016 मा फेसबुक प्रत्यक्ष सुरू भएको समयदेखि नै, हाम्रो टीम र हाम्रो लाइभ स्ट्रिमले विश्वभरका दर्शकहरूसँग अधिक ट्र्याक्शन प्राप्त गर्न शुरू गर्यो। हामी प्रत्येक शुक्रबार दुबै यूट्यूब र फेसबुकमा स्ट्रिम गर्दै थियौं। हामीले उत्पादन गरेका स्ट्रिमहरू प्रामाणिक थिए, र हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई उनीहरूको स engaged्लग्नतामा संलग्न गरायौं जुन लाइभ स्ट्रिमहरू निर्दोष प्रोडक्सनहरू छैनन्। यद्यपि समय बढ्दै जाँदा, हामी वास्तवमै यस क्षेत्रका विज्ञहरू भएका छौं र त्यो ज्ञान हाम्रो बढ्दो निम्नसँग साझेदारी गर्न सक्दछौं। यस समयमा मैले पुस्तक लेख्ने निर्णय गरें “ प्रत्यक्ष स्ट्रीमिंग स्मार्ट मार्केटिंग हो। "यो हामीले गरेको कामको परिणति हो, जुन हाम्रो यात्रालाई उदाहरणको रूपमा दर्साउँदछ कि अरूलाई पनि उनीहरूले दर्शकहरूसँग सम्पर्कमा ल्याउन र प्रत्यक्ष भिडियोको साथ आफ्नो ब्रान्ड निर्माण गर्न सक्दछन्। हामीले हाम्रा लाइभ स्ट्रिमि equipment उपकरण सेटअपको माध्यमबाट पाठकहरू लियौं किनभने हामी वास्तवमै अरूलाई यो ज्ञान र विशेषज्ञता दिन चाहन्थ्यौं। हामीले चेस्टर काउन्टी, पा। मा स्थानीय व्यवसायहरूलाई उनीहरूको सब भन्दा पहिले प्रत्यक्ष स्ट्रिमहरू उत्पादन गर्न मद्दत गरेका छौं। हामीले हिंस्रक अपराधको सिकार भएकाहरूको लागि स्थानीय गैर-नाफामुखी पैसा जम्मा गर्न मद्दतको लागि प्रत्यक्ष स्ट्रिमको उत्पादन र सह-होस्ट गरेका थियौं, र हामीले स्थानीय, सामुदायिक रेडियो स्टेशनको लागि एक प्रत्यक्ष स्ट्रिम पनि उत्पादन गरेका छौं। यी अनुभवहरूले हामीलाई हाम्रा दर्शकहरूको लागि सिकाउन योग्य क्षणहरू तर्फ डोर्‍यायो। हामीले उनीहरूसँग सबै कुरा साझा गर्‍यौं, हाम्रो पोडकास्ट स्टुडियोमा कार्यक्रमहरू प्रदर्शन गर्न क्यामेरा स्थापना गर्न पूर्व-प्रदर्शन र पर्दाको पछाडिको शटबाट, जहाँ हामीले हामीले गरेको सबै कुरा बिच्छेद गर्थ्यौं। प्रक्रिया एक पूर्ण पैमाने मा उत्पादन बन्न र हाम्रो दर्शकहरु लाई प्रत्येक चरणको हिस्सा हुन अनुमति दियो।
यसले हामीलाई एक ब्यक्तिगत शिखर सिर्जना गर्ने विचारमा पुर्‍यायो। मैले विशिष्ट ट्रेड शोबाट केहि सानो स्तरको कल्पना गरेको छु, उपस्थितहरूलाई साँचो कनेक्शन बनाउन र मूल्यवान अन्तरदृष्टि प्राप्त गर्ने अवसरहरूको साथ। यसबाट, यो स्ट्रिमगिक्स शिखर सम्मेलन जन्म भएको थियो।
नोभेम्बरमा 8 मा ड्रीम डाउनटाउन चेल्सीमा, मेरो टीम र म प्रत्यक्ष स्ट्रिमिंग शिक्षाको एक पूरा दिन होस्ट गर्दैछौं। 8 बिहान देखि5अपरान्ह सम्म, सहभागीहरू प्रत्यक्ष नेटवर्कको साथ सक्षम हुनेछन्
स्ट्रीमिंग पेशेवरहरू र एमेच्योरहरू उनीहरूको व्यवसायमा प्रत्यक्ष स्ट्रिम थप्न खोजिरहेका छन्। मलाई यो गर्व लागेको छ कि यो पूर्वी तटमा यो आफ्नो किसिमको पहिलो सम्मेलन हुनेछ, र हामी यसलाई अविस्मरणीय अनुभव बनाउन प्रतिबद्ध छौं।
स्ट्रिमगिक्स शिखर सम्मेलनको मुख्य वक्ता जिफ्री कोलोन, माइक्रोसफ्ट एडर्टाइजिंग ब्रान्ड स्टुडियोका प्रमुख र "विघटनकारी मार्केटिंग" को लेखक हुनेछन्। उनी लाइभ स्ट्रिमि ofको शक्ति र ब्रान्ड रणनीति, पोडकास्टि,, गेमि industry उद्योगमा यसको प्रभावमा केन्द्रित हुनेछन्। प्रत्यक्ष संगीत उद्योग, र खेलहरू। क्रिस प्याकार्डले भर्खरको लाइभ स्ट्रिमिंग प्लेटफर्म, लिंक्डइन प्रत्यक्षको बारेमा कुरा गर्ने छ। दुबै सीईओ, चिन्तित नेताहरू र उद्योगका विशेषज्ञहरू सामेल हुनेछन्।
शिखर कार्यशाला र प्यानलका अतिरिक्त, बिहीबार एक अद्वितीय वीआईपी रिसेप्शन हुनेछ। न्यु योर्क शहर मोबाइल स्ट्रिमि expert विशेषज्ञ जसले अर्बनिस्टको स्थापना गर्‍यो, प्रत्यक्ष स्ट्रिमि ofको बखत मासप्याकिंग जिल्लाको भ्रमण गर्ने छ!
त्यसोभए यदि तपाइँ लाइभ स्ट्रिमि education शिक्षा र नेटवर्कि forको लागि एक दिन निकाल्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई ड्रीम डाउनटाउन नोभेम्बर 8 मा भेट्नुहोस्। पूर्ण-दिन टिकट मूल्यहरू केवल $ 295 हो। खाजा समावेश गरिनेछ। आफ्नो टिकट पाउनुहोस् चाँडै नै किनभने घटना 250 सहभागीहरूमा क्याप्ड भइरहेको छ। भर्चुअल टिकटहरू पनि उपलब्ध छन्, र प्रिमियम भर्चुअल टिकटहरूले तपाईंलाई सबै कार्यशालाहरूको रेकर्डि। पहुँच गर्न अनुमति दिनेछ।
म तपाईंलाई बिग एप्पलमा पनि देख्न आशा गर्दछु!
पॉल स्ट्रिमजीकका प्रमुख स्ट्रीमि Officer अफिसर हुन् र "लाइभ स्ट्रिमिंग स्मार्ट मार्केटिंग हो" का लेखक। रिचर्ड्सले 20,000 विद्यार्थीहरूलाई UDEMY मा लाइभ भिडियो उत्पादन, मोबाइल स्ट्रिमि,, र अधिकमा सिकाउँदछन्। रिचर्ड्सले लास भेगासमा आधिकारिक एनएबी (नेश्नल एसोसिएशन अफ ब्रॉडकास्टरहरू) कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् र यो उद्योगमा एक विचार नेता हुन जारी छ।
isovideo, viarte, HDR, हल्ला कमी, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-कुलपति, 2015, बिटरेट कमी, एकाग्रता, UHD / 4K / HD, H264 / H265, वरस स्पियर र तीरहरू अल्ट्रा एचडी फोरम 2019-10-01
अघिल्लो: लेक्ट्रोसोनिक्स भेन्युएक्सएनयूएमएक्स रिसीभर प्रणाली अब उपलब्ध छ 2-941 मेगाहर्ट्ज ब्यान्ड
अर्को: 2019 HPA पुरस्कारहरूको लागि रचनात्मक कोटी नामांकन घोषणा गरियो